‘स्कुटर अम्ब्रेला’को प्रयोग बढ्दै, कति पर्छ मूल्य?
सुधिर भण्डारी काठमाडाै‌ं, असार २६
नेपालमा सडकको हालत निकै खराब छ। खाल्डाखुल्डी तथा धुलो उड्ने सडकमा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन चलाउन सकसपूर्ण छ। छोटै यात्रामा पनि दुई पाङ्ग्रेका चालकलाई दिक्दार बनाउँछ। घाम लाग्दा होस् वा पानी पर्दा, सबैभन्दा बढी दुःख बेहोर्ने दुई पाङ्ग्रेका चालकहरु नै हुने गर्छन्।
दुई पाङ्ग्रे साधनको यही समस्यालाई न्युनीकरण गर्न ‘स्कुटर अम्ब्रेला’ प्रचलनमा आएको छ। आजकाल राजधानीको यस्ता अम्ब्रेलायुक्त स्कुटरहरु बाक्लै देखिन थालेको छ। सडकमा देखिन थालेको धेरै नभएता पनि यसको बनावट र उपयोगीताले गर्दा धेरैको ध्यान तानिरहेको छ।
बिशेषतः स्कुटरलाई लक्षित गरी बनाइएको स्कुटर अम्ब्रेला सिधा सिट भएको बाइकमा समेत प्रयोग गर्न सकिने ‘मेरो सपिङ डट कम’का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीताराम रिमालले जानकारी दिए।
मेरो सपिङ डट कमले करिव एक महिना अगाडि यो उत्पादन ल्याएको भए पनि धेरै ‘इन्क्वायरी’ आइरहेको रिमालले बताए। ग्राहकले यसमा निकै चाख देखाएता पनि यसको गुणस्तर र हावाहुरी धान्न सक्ने वा नसक्ने बारेमा सोध्ने गरेको रिमालले बताए।
यसलाई नेपालमा ल्याउनुभन्दा पहिले अफूहरुले टेस्ट गरेको रिमालले जानकारी दिए।
“हामीले यसलाई हाइवेमा समेत टेस्ट ग¥यौं, ८० को स्पीडसम्म केही हुँदैन।”, उनले थपे, “ त्यसैले सामान्यतया ५०÷६० को स्पीडमा निर्धक्क भएर चलाए हुन्छ।”
स्कुटर अम्ब्रेलाको प्रचलन चाइनामा दुई बर्ष अगाडिदेखि नै भए पनि नेपालमा भने भर्खरै भित्रिएको हो। यसलाई भारतमा पनि निकै मन पराइएको रिमालको दाबी छ।
यसमा रेनकोटमा प्रयोग हुने उच्च गुणस्तरको रबर र प्लाष्टिक प्रयोग हुने भएकोले च्यातिने समस्या नहुने उनको दाबी छ। सामान्य प्रयोग गर्दा यो दुईतीन बर्ष टिक्ने उनी बताउँछन्।
यो अम्ब्रेला जडान गर्न र निकाल्न गाह्रो नहुने बताइएको छ। यसको मूल्य १ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएका रिमालले जानकारी दिए।
के–के छ त यसको फाइदा?
यसले सडकमा स्कुटर लिएर हिँड्दा सिधा आउने धुलो छेक्छ। गर्मी मौसममा छाताको काम गर्छ। त्यस्तै, जाडोमा चिसो हावा छेक्छ। यसको मुख्य विशेषता भनेको बर्षामा पानी छेक्ने रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिमाले जानकारी दिए।
बर्षात्को समयमा पानी छेक्नको लागि यसको चौडाइलाई त्यही अनुसार डिजाइन गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २६, २०७४, ११:३७:५४
खारेज भएका यातायात समितिलाई बैंकबाट पैसा झिक्ने अनुमति
७ लाख स्मार्टकार्ड जाँच्न जम्मा १ सय मेसिन
लाइसेन्स छाप्ने नयाँ प्रिन्टरमा समस्या, विभाग भन्छ– अब मास प्रिन्टर ल्याउँछौं
मुख्य राजमार्गमा रिक्सा र टेम्पो चल्न नपाउने